တစ်နေကုန်လှပနေစေမယ့် Mally ရဲ့ Evercolor Poreless Face Defender | CosmeticMyanmar
Home » Article » တစ်နေကုန်လှပနေစေမယ့် Mally ရဲ့ Evercolor Poreless Face Defender
တစ်နေကုန်လှပနေစေမယ့် Mally ရဲ့ Evercolor Poreless Face Defender
လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်ဟာ တစ်နေကုန်မခံလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ပျိုမေတို့ ရှိနေပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ Mally အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Evercolor Poreless Face Defender လေးကို အသုံးပြုပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပြီပေါ့နော်။ Mally ရဲ့ ဒီ Evercolor Poreless Face Defender လေးက မိတ်ကပ်လေးကို တစ်နေကုန် ကြာရှည်ခံလှပနေစေရုံသာမကဘဲ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီးပါဝင်သေးလို့ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့နော်။
Mally ရဲ့ ဒီ Evercolor Poreless Face Defender ရဲ့ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ်ကို တစ်နေကုန်ကြာရှည်လှပနေစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရာမှာလည်း မညီမညာဖြစ်ခြင်းကို မဖြစ်စေဘဲ ညီညာချောမွေ့စေတဲ့အပြင် လိမ်းထားရာမှာ ထူအမ်းအမ်းဖြစ်မနေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေခြင်းကိုလည်း ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့ထိတွေ့မှုလေးနဲ့အတူ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဝက်ခြံတွေ၊ အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို Coverage လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ လိမ်းပြီးရာမှာလည်း နူးညံ့ချောမွေ့မှုကို ခံစားရရှိစေပြီးတော့ သဘာဝအတိုင်းလှပတဲ့ ပြင်ဆင်ခြယ်သမှုကို ရရှိစေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကို လေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခရမ်းရောင် လေးထောင့်ဘူးပုံစံလေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အတွင်းဘက်အဖုံးမှာ မှန်အသေးလေးပါဝင်တဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာသုံးသုံး အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ puff လေးထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်လည်း လိမ်းခြယ်မှုကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
အသုံးပြုပေးနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ ပါဝင်တဲ့ puff လေးကို ဒီ Face Defender လေးနဲ့ ပွတ်သုတ်ပြီး မျက်နှာပြင်မှာ တို့တို့ပေးရမှာပါ။ ပွတ်ဆွဲတာတွေ မလုပ်ရပါဘူးနော်။ နှာခေါင်းဘေးဘက်နဲ့ မျက်လုံးအတွင်းဘက် ထောင့်နားတို့လို တို့ရမလွယ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ puff ဘေးစွန်းထောင့်လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ Mally ရဲ့ Evercolor Poreless Face Defender ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်နေကုန်လှပမှုကို ဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့နော်။
Image Source – www.mallybeauty.com/
ကိုယ်ပိုင် Makeup Line တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Jennifer Lopez
အရည်အသွေးကောင်းတဲ့မိတ်ကပ်ဆိုရင်တော့ ALMAY ရဲ့ ဒီ Best Blend Forever Makeup လေးရှိတယ်နော်!!!